भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने तालिका सार्वजनिक, कहाँ कहिले हुँदै छ उडान ? (हेर्नुस सूचना सहित) – Kavrepati
Home / समाचार / भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने तालिका सार्वजनिक, कहाँ कहिले हुँदै छ उडान ? (हेर्नुस सूचना सहित)
admin June 23, 2021	समाचार Leaveacomment 54 Views
काठमाडौं । सरकारले भोलि (बुधबार)देखि अन्तर्राष्ट्रिय र १७ असारबाट आन्तरिक ह्वाई उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको तालिका अनुसार भोलिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय र १७ असारबाट आन्तरिक कूल उडानको ५० प्रतिशत ह्वाई उडान गर्न लागेको छ ।
आन्तरिक उडानतर्फ भनेको तोकिएको उडान संख्याबमोजिम १ जुलाई अर्थातः १७ असारबाट नियमित उडान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एक हप्ताको अवधिभित्र टिकेटिङ, उपत्यका बाहिर रहेका वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीलाई उपत्यका फर्कने समय व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कहाँबाट कहिले हुन्छ उडान
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार भोलि बिहीबार नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्किस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट उडान भर्नेछ ।
२५ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापान जाने तालिका छ भने एयर इन्डियाको जहाज दिल्लीबाट काठमाण्डौ आउनेछ ।
२६ जुनमा कतार एयरवेजको जहाज दोहाबाट काठमाण्डौ आउनेछ । टर्किस एयरलाइन्सको जहाज इस्तानबुलबाट काठमाण्डौ आउने र एयर अरेबियाको जहाज आबुधाबीबाट काठमाण्डौ आउने गरी उडान तालिका तय भएको छ ।
२७ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सले दोहा, हिमालय एयरलाइन्सले क्वालालाम्पुर र दुबईमा एक/एक उडान गर्नेछन् । कतार एयरवेज दोहाबाट काठमाण्डौ आउने छ भने जजिरा एयरवेज कुवेतबाट काठमाण्डौ आउने उडान तालिका छ ।
२८ जुनमा कतार एयरवेजले दोहाबाट उडान गर्नेछ भने नेपाल एयरलाइन्स यूएईको दुबई जाने छ । हिमालय एयरलाइन्सले साउदीको दमाममाका लागि उडान भर्ने तालिका तय भएको छ ।
२९ जुनमा नेपाल एयरलाइन्स दोहा जाने र टर्कीबाट टर्किस एयरलाइन्स नेपाल आउने तालिका छ । फ्लाई दुबई दुबईबाट र ओमानबाट सलाम एयरको जहाज काठमाण्डौ आउने छन् ।
३० जुनमा कतार एयरवेजले दोहा, जजिरा एयरवेजले कुवेतबाट उडान गर्ने गरी तालिका तय भएको छ भने नेपाल एयरलाइन्सले दुबई, हिमालय एयरलाइन्सले दमाम उडान भर्ने तालिका पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
गएको वैशाख २३ गते मध्ये रातिदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जेठ १८ गतेदेखि कतार, चीन र टर्कीबाट सातामा एक उडान हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाइएको थियो ।
Previous पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार १० गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल